panontaniana ao amin’ny aterineto ny fiarahana Mpitari-dalana — ny Fiarahana amin’ny Aterineto
Ny internet toerana ny mampiaraka an-tserasera manome ny multifunctional ny asa fanompoana izay manamora ny fifandraisana sy ny serasera eo amin’ny isam-batan’olona, ny mpivady, sy ireo vondrona amin’ny alalan’ny aterineto. Matetika dia narafitra mba amporisiho ny fanaovana fiaraha-mientana ifampizarana fahalalana sy ny fihaonana eo amin’ny olona iray ao amin’ny fikarohana ny namana, ny tantaram-pitiavana traikefa nahafinaritra, ny fifandraisana ara-nofo, na amin’ny fanahy vady. Raha nisoratra anarana ianao, dia mametraka ny mombamomba ny tena, manapa-kevitra izay angon-drakitra mba hizara amin’ny hafa ny mpikambana sy ny fifidianana ny fidirana amin’ny fomba, ary dia matetika omena ny mameno ny toetra fitsapana mba hanome ny rafitra amin’ny tahirin-kevitra andian-dahatsoratra izay hanampy azy mba soso-kevitra ho anao ny andian-ny mombamomba ny olona hafa voasoratra izay mety ho mifanaraka amin’ny ny toetrany, ny zavatra tiany sy ny zavatra andrasana. Izany dia atao amin’ny alalan’ny fampitahana ny toetra fitsapana mifototra amin’ny filàna fepetra, matetika dia naorina miaraka amin’ny fanampian’ny mpitsabo rarin-tsaina sy manam-pahaizana any an-tsaha. Ny fomba mba hifandray sy ho nifandray maro: indray mandeha izay tsy maintsy jerena ny mombamomba azy — eo anivon ‘ireo tolo-kevitra avy amin’ny rafitra, ary koa teo anivon’ ireo mpikambana, ihany koa, eo amin’ny fototry ny fifantenana ny fepetra napetraky ny mpampiasa, ny toy izany koa — ampahafantaro ny olona izay te-hifanerasera: tamin’io fotoana io, dia afaka manomboka ny resaka natao amin’ny alalan’ny firesahana amin’ny (ary matetika koa ao ny phone-ny firesahana amin’ny sy ny lahatsary amin’ny chat), ny lalao mampiasa ny asa fanompoana tsy miankina fandefasan-kafatra, mamela ny hafa mba hahazoana fanazavana bebe kokoa (ohatra ny sary) ary, farany, ny hanova ny fihaonana avy amin’ny fanohanana virtoaly mankany amin’ny tena, izany hoe, nikarakara tena fanendrena. Ny toerana dia manome ny asa fanompoana izay no voakasika mba ho azo antoka araka izay azo atao), ny marina ny tahirin-kevitra tao ary mba miditra an-tsehatra amin’ny raharahan-ny tatitra momba ny fanararaotana na fitondran-tena. Indrindra an-tserasera mampiaraka toerana saram-monina (izay mihitsy no singa ny fifantenana), fa mamela anao hanao sonia sy ny fahafahana hahazo ny sasany amin’ireo asa fototra ao amin’ny endriky ny maimaim-poana na ny soa azo avy maimaim-poana ny rehetra ny endri-javatra sy ny safidy ho an’ny fitsarana vanim-potoana. Ny toerana sasany dia nanolo-tena ny mpampiasa amin’ny manokana maniry; ohatra, misy tena fanambadiana sampan-draharaha misahana ny aterineto ho an’ireo izay te-hahita ny fanahy vady, na hihaona sy ny fifandraisana hafa ny olona express tanjon ny fanorenana ny fifandraisana matotra sy maharitra. Amin’ity tranga ity, ny fitsapana ny mifanentana mpivady ho amin’ny antsipirihany kokoa sy in-lalina. Amin’ny toe-javatra hafa dia hahita toerana kokoa»masiaka», mazava mirona mankany amin’ny fialam-boly sy ny ny firaisana ara-nofo adventure (koa ny lehilahy miray amin’ny lehilahy), na fotsiny ny toerana tsara indrindra mba hanitarana ny finamanana sy ny fidirana tambajotra sosialy, sehatra fiadian-kevitra sy ny adihevitra. Izany rehetra izany, na dia any Italia, tato anatin’ny taona maromaro izay dia lasa ho fironana, tena mieli-patrana sy nalaza. Misy an-tapitrisany tokana olona mitady mpiara-miasa: ny aterineto ny zava-drehetra mahatonga mora kokoa. Ny toerana fiarahana aterineto manolotra asa fanompoana matihanina mametraka ny tenanao ao amin’ny toerana mety kokoa, sy manome vahana ny malalaka hifidy ny fotoana sy ny fomba tianao, ny tena lafatra indrindra mpiara-miasa, amin’ny alalan’ny fanohanana, ny fanaraha-maso ny, fifidianana, sy ny fifandraisana izay manao izany fikarohana lehibe, fahafahana-karena sy mahomby. By nampidirinay tsara ny mombamomba azy sy ny fepetra fikarohana dia afaka mahazo ny maro ny mombamomba ny olona fa afaka manao ny raharaha, tao amin’ny discrete fomba manapa-kevitra ianao ny fotoana sy ny fomba. Mba hahitana ny marina ny olona dia ho mora kokoa noho ny fitsapana mifanentana. Izany rehetra izany dia hita ho tena mahomby kokoa noho ny nentim-paharazana ny fikarohana ny eo an-toerana ao an-toerana na ny fampiasana ny kokoa generic manokana ny dokam-barotra. Ny toerana misy ny»an-tserasera daiting»no, eo ho eo, nanatrika ny mpanatrika ireo mpampiasa kokoa sy lehibe kokoa ny lehilahy sy ny vehivavy eo anelanelan’ny sy ny taona. Mba enrol tsy maintsy ho olon-dehibe, fa tsy misy hafa taona fetra. Ny olona dia afaka ny ho tena isan-karazany, ary avy eo dia mifandray amin’ny toerana izay ho mifanaraka kokoa ho azy ireo: ireo izay mitady namana vaovao, izay ny traikefa nahafinaritra, izay na dia fanahy iray vady. Asehon’ny antontan’isa fa ny sokajy ny olona ny tena samihafa: ny tanora, olon-dehibe, ny matihanina, ny mpiasa, ny artista, sns. Eny. Olona an’arivony no manomboka ny fifandraisana amin’ny alalan’ny rafitra an-tserasera, dia hahazo ny maro ny zava-nitranga, ary ny sasany dia tonga ihany koa ary hahazo manambady. Mampiasa ny internet ianao dia mety hahita ireo tenivavolombelona maro ny momba izany. Ny an-tserasera mampiaraka toerana manome maro ny tolotra, ny fikarohana sy ny fifandraisana amin’ny maro ny olona fa ianao dia afaka mifidy ny taona, toe-batana, toetra, ny zavatra tiany, sata ara-tsosialy, ny tarehiny (sary), faritra ara-jeografika, sy ny sisa. Ny fifandraisana atao ao anatin’ny endrika tsy mitonona anarana, ary mamela ny olona manapa-kevitra ny fomba, ny fotoana sy izay mba hizara vaovao bebe kokoa sy amin’ny antsipiriany. Ny anisan’ny asa fitiliana ny mifanentana, fomba fifantenana, ny vaovao momba ny hoe iza no an-tserasera, ny firesahana, ny mailaka, antso an-firesahana amin’ny sy ny lahatsary amin’ny chat miaraka amin’ny maro ny mpampiasa tamin’ny izany fotoana izany, ary ny fanompoana ny antonony sy ny fanohanana izay mitondra ny tsikera, ny fitarainana na ny fanararaotana. Ny fampiasana azy amin’ny fanentanana sy fahatsapana tsara ny rafitra, izay afaka ho azo antoka kokoa noho ny hafa: misy mpandrindra, araka izay azo atao, dia voamarina ny maha-izy azy, ny vidiny no miantoka ny faran’izay kely fifantenana ny lasa, dia misy ny mpanjifa izay ny tatitra misy ny olana na ny fanararaotana. Ny toerana dia matetika feno maro ny toro-hevitra sy soso-kevitra mba hanao fikarohana soa aman-tsara, ny fitondran-tena ao amin’ny chat, ary mifanatrika ny fivoriana. Ny ny maha-izy azy dia rakotry ny fiainana manokana sy azo zaraina, manaiky ny fepetra napetraky ny mpampiasa, raha tsy eo ny mpikambana nisoratra anarana.
Indrindra an-tserasera mampiaraka toerana mamela maimaim-poana ny fidirana ho mpikambana, ny fahafahana mba ampidiro eto ny mombamomba azy (miaraka na tsy misy sary), ny fahazoana ny toetra fitsapana sy fomba fijery hafa ny mombamomba amin’ny endrika ampahany. Hahazo ny fidirana amin’ny fifandraisana ianao mila misoratra anarana rehefa afaka izany, dia afaka mampiasa ny hafatra manokana, chat-efi-trano, ary ny hafa rehetra ny asa. Maro ny vohikala mamela anao ny fidirana amin’ny banga asa amin’ny endrika maimaim-poana na feno ny fidirana ho fitsapana fe-potoana, matetika andro vitsivitsy. Ianao no mandoa ny famandrihana isam-bolana, isan-telo volana, ny antsasaky ny isan-taona, isan-taona, sns.
na dia afaka mividy nahazoan-dalana (c)
Indraindray misy tombontsoa na ny fiantohana ny vanim-potoana: ohatra, raha toa ianao manana fifandraisana ao anatin’ny fe-potoana sasany, izany dia nitohy ny famandrihana fe-potoana ny hafa, ny ohatra, volana maimaim-poana. Toerana misy ny maro amin’izy ireo, ary izy ireo no mamoaka ireo vaovao isam-bolana. Ny toerana dia nandinika sy nizaha toetra dia ny tsara indrindra dia ny mahita azy ireo voatanisa ary nandinika eto Ihany ny olona nisoratra anarana ny toerana afaka mijery ny mombamomba azy. Ankoatra izany, maro ny toerana dia manolotra ny fiarovana fanampiny safidy izany fa ny mpikambana afa-tsy ireo efa nahazo lalana avy amin’ny mpampiasa dia ho afaka ny hahazo fanazavana fanampiny, na, ohatra, ny sary na ny webcam-chat. Afaka hanafoana ny tantara amin’ny alalan’ny fandefasana ny e-mail ny mpitantana ny vohikala, na amin’ny alalan’ny fampiasana ny mety fomba rehefa voalaza. Maro ny toerana izay manome ho an’ny automatic fanavaozana ny ny famandrihana ho an’ny izay ao amin’ny raharaha dia toy izany no hikarakara ny mampahafantatra ny asa fanompoana raha te-hamarana ny kaonty namela azy faty sy tsy fanavaozana ny maha-mpikambana. Ny tatitra momba ny fanararaotana ny ankizy na ny maha-tsy ny iray ihany dia afaka hifandray ny toerana mpitantana, ny mpandrindra na ny mpanjifa. Ny mpiasa an-tsehatra ny hampiato ny fisoratana anarana ny ny olona
← Lehilahy Mitady Vehivavy Naples Ankizilahy Naples - Mampiaraka Ny Lahatsary Amin'ny Chat Fivoriana
Ny Olon-Dehibe - Dating - Italia →